Portugal 1-1 Iceland: Xulka Yar Ee Iceland Oo Ka Yaabsaday Portugal Kulankoodii Ugu Horeysay Ee Tartan Caalami Ah. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Portugal 1-1 Iceland: Xulka Yar Ee Iceland Oo Ka Yaabsaday Portugal Kulankoodii Ugu Horeysay Ee Tartan Caalami Ah.
Portugal 1-1 Iceland: Xulka Yar Ee Iceland Oo Ka Yaabsaday Portugal Kulankoodii Ugu Horeysay Ee Tartan Caalami Ah.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 14-06-16 9:05 PM Xulka Portugal ayaa niyadjab kala kulmay xulka yar ee Iceland kuwaasoo si taariikhi ah ku bilowday koobkoodii ugu horeysay abid ka dib markii ay barbaro 1-1 ah ku qabteen xulka Portugal. Gool uu dhaliyay Nani qeybtii hore ayaa waxaa bilowgii qeybta labaad beeniyay Bjarnason kaasoo dhaliyay goolkii ugu horeysay abid ee xulkiisa ee tartan caalami ah.
Xulka Iceland ayay kulankaan u aheyd mid taariikhi ah waa markii ugu horeysay abid ee xulkaan uu ka qeyb qaato tartan weyn oo heer caalami, waxaa xusid mudan in dadka ku nool Iceland ay tiradooda gaareyso kaliya 330 kun. Boqolkiiba sideed dadkooda waxa ay soo aadeen France si ay u taageeraan xulkooda, waxaa iyadana xaqiiqo ah in boqolkiiba 100 in magacyada ciyaartoydooda inay ku dhamaato ereyada ‘son’.
Fursadii ugu horeysay ee ciyaarta waxaa heshay xulka Iceland iyadoo Gyfli Sigurdsson uu ka soo xarooday garabka bidix ee xerada goolka Portugal laakiin darbadiisa oo kululeyd waxa ay ku aaday goolhaye Rui Patricio, kubadii soo laabatay ayuu mar kale Sigurdsson ku celiyay laakiin waxa ay gacmaha u gashay Patricio.
Portugal ayaa kubada inteeda badan heysatay laakiin waxaa hortaagnaa Iceland kuwaasoo si adag u difaacanayay kubada. Waxa ay ku qasbeen daqiiqadii 18aad in goolhaye Halldorsson uu badbaadin sameeyay markii Vieirinha uu soo tuuray kubad gantaal ah oo uu lugta bidix ku soo qaaday.
Laakiin Portugal ayaa laga beeniyay fursad gool loo fishay daqiiqadii 21aad. Cristiano Ronaldo ayaa karoos fiican soo dhex dhigay xerada goolka, waxaa madax ku qabtay Nani laakiin waxaa badbaadiyay goolhaye Halldorsson oo lugta ku bixiyay.
Mar kale ayay Portugal fursad kale abuurtay daqiiqadii 26aad markii Pepe uu kubad dheer u soo qaaday Ronaldo kaasoo hortaagnaa goolka hortiisa wuxuu u baahnaa kaliya inuu kubada ka dulqaado goolhaye Halldorsson laakiin si wacan lugta ulama uusan helin.
DAQIIQADII 31aad GOOOL!!!! Portugal ayaana hogaan ay u qalantay u qabatay ciyaarta, Mourinho iyo Gomes ayaa kubad ku soo dhisay garabka midig, iyadoo Gomes uu markii danbe kubada u soo dhigay Nani oo xerada goolka ku jiray kaasoo isna shabaqa ku taabtay.
Luis Nani ayaana dhaliyay goolkii 60aad ee taariikhda koobka qaramada Yurub. Waana goolkii 18aad ee uu Nani u dhaliyo xulka qarankiisa 86 kulan uu u saftay. Waxaana qeybtii hore lagu kala nastay goolkaas iyadoo gacanta sarre ee ciyaarta ay laheyd xulka Portugal.
Portugal ayaa ku bilaabatay qeybtii labaad si la mid ah sidii ay ku dhameysteen qeybtii koowaad ee ciyaarta iyadoo Cristiano Ronaldo uu darbo xoogan la beegsaday goolka balse ay si ciriiri ah ku hareermartay.
DAQIIQADII 51aad GOOOL!!! Portugal ayaa lagu ciqaabay difaacasho xumo iyadoo Gudmundsson uu karoos soo dhex dhigay xerada goolka waxaana ay kubada lugta u gashay Bjarnason oo cidna aysan xiraneynin kaasoo kubada shabaqa dhex dhigay. Bjarnason ayaa taariikh dhigay isagoo noqday xiddigii ugu horeeyay ee tartan caalami ah gool u dhaliya xulka Iceland.
Portugal ayaa cadaadis uu ku saarnaa inay hogaanka ciyaarta soo ceshtaan xitaa bartamihii qeybta labaad bedel ku soo galay da’ yarka aadka loo qiimeeyo Renato Sanches kaasoo bedelay Moutinho. Sanches ayaana jabiyay rikoorkii Cristiano Ronaldo isagoo noqday xiddigii ugu da’da yaraa ee abid koob weyn u safta xulka Portugal isagoo da’diisa ay tahay 18 sanno iyo 301 maalmood, halka Ronaldo uu kulankiisii ugu horeysay ku saftay isagoo ah 19 sanno jir iyo 128 maalmood.
Xulka Portugal waxa ay sidoo kale heleen fursad qaali ah daqiiqadii 71aad, iyadoo laad xor ah uu soo qaaday Guerreiro uu madax la helay Nani laakiin si ciriiri ah ayay kubada ku hareermartay goolka.
Labo daqiiqo ka dib Iceland ayaa ku andacootay rigoore markii ay kubada garabka kaga dhacday Guerreiro laakiin garsooraha ayaa ku saxnaa inuusan u dhigin madaama ay aheyd banaanka xerada ganaaxa sidoo kalena ay aheyd mid kama ah oo aan ku talogal aheyn.
Ciyaarta oo mareysa 82 daqiiqo ayay mar kale Portugal fursad heleen, Quaresma oo bedel ku soo galay ayaa kubad kooner ah uu soo qaaday waxaa madax la helay Pepe kaasoo si dhow ku dulmariyay goolka. Daqiiqadii 85aad Ronaldo ayaa ku dhawaaday inuu shabaqa soo taabto weliba fursad gool loo fishay ka dib markii uu madaxeeyay kubad karoos ah uu u soo dhigay Nani laakiin goolhayaha Iceland ayaa ka badbaadiyay.
Dubadiiba Iceland ayaa dhanka kale kubad rogaal celis ah sameysay iyadoo darbo halis ah oo ka baxday Finnbogason uu u babacdhigay goolhaye Rui Patricio kaasoo badbaadiyay Portugal.
Waxaana ay ciyaarta ku soo idlaatay barbaro 1-1 ah iyadoo dhibicdaas ay wax weyn ugu fadhiso xulka yar ee Iceland kuwaasoo si lama filaan ah ku bilowday tartanka Euro 2016. Group F waxaa haatan seddex dhibcood ku hogaamineysa xulka Hungary oo mar sii horeysay maanta 2-0 kaga badiyay xulka Austria oo u hooseeya Group-ka halka Portugal & Iceland ay leeyihiin min hal dhibcood.